မကြာခင်တွေ့ရတော့မယ့် Samsung ရဲ့ ပထမဆုံး 5nm EXYNOS 1080 Chipset နဲ့ ဖုန်း — Anycall Mobile
မကြာခင်တွေ့ရတော့မယ့် Samsung ရဲ့ ပထမဆုံး 5nm EXYNOS 1080 Chipset နဲ့ ဖုန်း
By Naw Htoo Aung October 12, 20202Mins Read
Samsung အနေနဲ့ မကြာသေးခင်က သူတို့ရဲ့ Exynos 1080 Flagship Chipset အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Chipset ဟာ 5nm Process အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Samsung ရဲ့ ပထမဆုံး Chipset ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီ Chipset ကိုပထမဆုံးသုံးလာမယ့်ဖုန်းကတော့ မကြာခင်မှာထွက်လာတော့မယ် Samsung Galaxy A72 ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Exynos 1080 ရဲ့ Key Specs တွေအနေနဲ့
Samsung Exynos 1080 ဟာ Samsung ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် 5nm LPE process အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Chipset တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့မှာ CPU အတွက် ARM ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Cortex-A78 နဲ့ Cortex-A55 dual-cluster Cores တို့ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ GPU အတွက်တော့ Mali-G78 GPU ကိုသ‌ံုးပေးထားပါတယ်။
Cortex-A78 ကြောင့် Chip ရဲ့CPU Performance ဟာ အရင် Cortex-A77 နဲ့ယှဉ်ရင် 20% အထိတိုးတက်သွားပြီး GPU Performance မှာတော့ Mali-G78 ဟာ အရင်က G77 ထက် 25% အထိတိုးတက်သ‌ွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး Samsung Exynos 1080 ဟာ AnTuTu Score မှာ650,000 Points အထိရထားပါတယ်။ ဒီအမှတ်ဟာ Asus ROG Phone3မှာအားဖြည့်ပေးထားတဲ့ Qualcomm Snapdragon 865 Plus ( 629,245 points) ထက်ပိုများပါတယ်။ ကြမ်းသွားပြီ :3
Samsung အနေနဲ့ Exynos 1080 Chipset နဲ့ Galaxy A72 ကို ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာထုတ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy A72 အပြင် Vivo ရဲ့ VIVO X60 မှာလည်း ဒီ Chipset နဲ့ပဲအားဖြည့်‌ပေးလာဦးမှာပါ။
ဆိုတော့ ဘယ်ဖုန်းကမ‌ျား ဈေးကွက်ထဲကို အရင်ရောက်လာမလဲ ??
VIVO X60 လား Galaxy A72 လား???
ဆက်စပ်သတင်းအနေနဲ့ ခဏလေးတင်ကပဲ ဒီ Exynos 1080 Chipset နဲ့ Orion ဆိုတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး AnTuTu Score မှာ 693,600 Points အထိရခဲ့ကြောင်း AnTuTu က Shared ခဲ့ပါ‌ေသးတယ်။
AnTuTu ရဲ့Score ထဲမှာ ဒီဖုန်းမှာ 2376 x 1080 full HD+ resolution ရှိတဲ့ Display သုံးထားကြောင်းဖော်ပြထားပြီး 120Hz refresh rate နဲ့ 8 GB LPPDDR5 RAM ၊ 512 GB UFS 3.1 storage ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖုန်းကတော့ Vivo X60 ပါပဲ။ တကယ်လို့သာ Vivo X60 မှာ ဒီ Score ရခဲ့ရင် လက်ရှိ Android ဖုန်း‌တွေထဲက စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး ROG3ကိုကျော်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖုန်းအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လာနိုင်မ‌ှာပါ။
ကဲဘယ်ဖုန်းလဲဆိုတာသိရဖို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်..